Akhriso:Khudbaddii Madaxweyne Farmaajo ka Jeediyey Shirka Africa Now – Gedo Times
class="post-template-default single single-post postid-54301 single-format-standard">
Home / Wararka Maanta / Akhriso:Khudbaddii Madaxweyne Farmaajo ka Jeediyey Shirka Africa Now
Akhriso:Khudbaddii Madaxweyne Farmaajo ka Jeediyey Shirka Africa Now
�Hadda ayaynu u baahannahay hoggaan dardargeliya isbeddelka bulsho iyo dhaqaale ee Afrika; hadda ayaynu u baahannahay inaan yagleelno mustaqbal waxtar u leh dhallinyarada iyo haweenka Afrika, hadda ayaan u baahaannahay inaan fahanno isla markaana ka hortagno saamaynta Isbeddelka cimiladu ku yeelanayo koboca dhaqaalaha; hadda ayaan u baahannahay inaan xal heer degmo, heer qaran iyo heer caalami ah u helno caqabadaha aynu wadaagno sida kuwa ganacsiga iyo amniga. Ugu danbayntiina, hadda ayaynu u baahannahay inaynu isku xirno dhaqaaleheenna innaga oo adeegsanayna kaabayaal dhaqaale oo muuqda iyo kuwa casriga ah, si aan u helno Afrika isdhexgalkeedu sarreeyo, nabdoon isla markaana dhaqaaleheedu kobcayo.
�Waxaan fursad u helay inaan ka qayb-galo kulamo kala duwan intii shirku socday aniga oo dhegaystay fikrado badan, siyaasado iyo tallaabooyin la soo jeediyay, waxaana qirayaa inaan ku rajo weynahay inaan ka qaarad ahaan gaari karno himilooyinkeenna haddii aan xoojinno iskaashigeenna. Ma jirto caqabad aan laga gudbi karin, buur aan la fanan karin iyo meel aan la gaari karin, haddii la helo ujeeddo guud iyo dadaal dhankeenna ka yimaadda. Waxaan aaminsanahay inaan haysanno hay’adihii, dadkii, aragtidii iyo hoggaamintii loo baahnaa si aan u gaarno Afrika isdhexgalkeedu sarreeyo, nabdoon isla markaana dhaqaaleheedu kobcayo.
Hoggaaminta iyo masuuliyad wadareedku waa tiirarka ugu muhiimsan ee isbeddelka, dib u habaynta iyo horumarka. Isdhexgalka, Amniga iyo Koboca Dhaqaale ee Afrika waa masuuliyad saaran qof kasta oo kamid ah hoggaamiyayaasha siyaasadda iyo ganacsiga iyo sidoo kale muwaadin kasta. Si kale haddaan u dhigo, waa inaan dhammaanteen ka qayb-qaadannaa horumarinta qaaraddan qaniga ah isla markaana qurxoon. Waqtigii wax kasta laga sugi jiray dowladda waa uu dhammaaday. Dowladaha, hoggaamiyayaasha ganacsiga iyo muwaadiniintu waa inay si dhaw uga wada shaqeeyaan sidii loo abuuri lahaa heshiis bulsho oo cusub oo ku salaysan yagleelidda mustaqbal dan u ah dhammaan dadka oo idil. Waa inaynu ganacsiga iyo siyaasadda casriyaynaa oo hal abuur cusub ku soo kordhinnaa, kana faa’idaysannaa iskaashiyada caalamiga ah iyo kuwa heer qaarad. Waa inaan si madaxbannaan u qiimaynaa saamaynta siyaasadeheenna isla markaana si wadajir ah u fekernaa, maxaa yeelay wadajirka ayaynu ku xooggannahay, �
← Previous Story Daawo:Maxkamada Darajada 1aad oo soo gabagabeysay dhagysiga Rag ka tirsan shabab
Next Story → Daawo:Kulan looga arrinsanayay Sameynta Golaha deeganka ayaa lagu qabtay magaalada Caabudwaaq